XOG XASAASI AH: Villa Soomaalia oo Gudbisay Dacwad ka dhan Safarkii Muuse Biixi ee Imaaraadka. – Xeernews24
Dowladda fedaraalka Soomaaliya ayaa golaha ammaanka QM u qortay ashtako ka dhan safarkii madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu dhowaan ku tagay dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta, sida uu qoray wargeyska East Africa Business Week.
Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay si gaar ah uga cadhootay in Imaaraadka Carabta ay Muuse Biixi ku qaabileen calanka maamulka Somaliland iyo ayada oo heesta astaanka qaranka Somaliland loo tumay.
Wakiilka maamulka Somaliland ee Kenya, Cumar Baashe oo arrintan ka hadlaya ayaa yidhi “Haddii aan nahay Somaliland waan ka xunnahay ashtakada ay dowladda Soomaaliya u gudbisay golaha ammaanka ee QM ee ku aadan safarkii uu madaxweyne Muuse Biixi dhowaan ku tagay Imaaraadka Carabta”
“Waxaan doonayaa inaan ku celiyo in Somaliland ay tahay dal madax banaan oo leh xuduudo caalami ah oo la aqoonsan yahay iyo dowlad si dimoqraadi ah loo doortay. Somaliland waa ay u madax banaan tahay in la macaamisho dalalka kale, umana baahna fasaxa dowladda Soomaaliya” ayuu yidhi Cumar Baashe.
SAWIRRO: Soomaali loo heysto inuu Xaaskiisa ku dilay dalka Mareykanka oo lagu... Hogaamintii xisbiga oo Qarka u saaran inay Jaha cusub u wareegto.